Somaliland.Org » 2009 » January
Maalqabeenno reer Galbeed ah oo u yimi Maalgashi ku darsadaan Wershedda Daqiiqda ee laga dhisayo Berbera
Tuesday, January 27th, 2009 Comments Off
Hargeysa (Somaliland.org) – Waxa shalay dalka soo gaadhay khubaro iyo maalqabeeno u dhashay dalalka Germany iyo Maraykan kuwaas oo sahamin ku samaynayay maalgashi ay doonayaan inay ku darsadaan wershadda daqiiqda oo dhismaheedu ka socdo magaalada Berbera. Madaxtooyada oo la wareegtey lacag loogu deeqay Cusbitaalka Gebiley
Hargeysa (Somaliland.org) – Madaxtooyada Somaliland ayaa la wareegtay lacag gaadhaysa 470,000 kun oo dollar oo gudoomiyaha ururka bisha cas ee dalka Imaaratka carabta Sheekh Xamdaan Binu Saayid Alla nahiyaan ugu deeqay in cusbitaal casri ah loogu dhiso degmada Gabiley. Warkan oo aanu ka helnay ilo xog-ogaal ah ayaa sheegay in lacagtan oo wakiil ka socday […] Xisbiga KULMIYE oo beeniyey warar laga faafiyey
Hargeysa (Somaliland.org) – Xisbiga KULMIYE ayaa war aan waxba ka jirin oo been abuur ah ku sheegay war maanta lagu baahiyay wargeyska Waaheen oo sheegayay in xisbiga KULMIYE tirtiri doono heshiisyada xukuumadu la gasho wadamada ethiopia iyo Djibouti marka uu ku guulaysto hogaanka dalka. Warsaxaafadeed maanta ka soo baxay xafiiska KULMIYE ee magaalada Hargeysa oo […] Shirka Golaha Dhexe ee UCID oo Arbacada Furmaya iyo Shirweynaha UDUB oo la muddeeyey
Hargeysa (Somaliland.org) – Shirka golaha dhexe ee xisbiga UCID ayaa la filayaa inuu maalinta bari ah ee bisha January tahay 28-ka uu ka bilaabmi doono Hotel Maansoor ee magaaladda Hargeysa. Gudoomiyaha gudidda qaban qaabada ee xisbiga UCID Aadan Mire Waqaf ayaa sheegay in shirka golaha dhexe ee xisbigu uu maalinta arbacada ka furmayo magaaladda Hargeysa. […] Maamulka cusub ee Jaamacadda Hargeysa oo xilkii la wareegay
Hargeysa (Somaliland.org) – Maamulka cusub ee jaamacadda Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah xilkii ugala wareegay maamuulkii hore ee jaamacadda, xaflada xilwareejinta ee ay labada maamul kula kala wareegayeen oo lagu qabtay xarunta jaamacadda Hargeysa waxa ka soo qayb galay gudidda ku meel gaadhka ah ee hogaanka jaamacadda iyo masuuliyiin kale. Gudoomiyihii hore ee jaamacadda […] Qaban-Qaabada Shirweynaha UDUB Iyo Xaaladaha Mad-Madowga Leh Ee Ku Xeerran